महिनावारी भएकाे बेलामा पेट दुख्ने समस्या भएका महिलाहरुका लागि प्याजले गर्छ औषधीकाे काम ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / महिनावारी भएकाे बेलामा पेट दुख्ने समस्या भएका महिलाहरुका लागि प्याजले गर्छ औषधीकाे काम !
admin October 27, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 184 Views
काठमाडौँ । काँचो प्याजको सेवनले कैयौँ समस्याको समाधान गर्छ । तपाई हाम्रो भान्समा दैनिक रुपमा उपभोग हुने प्याजले क्यान्सर देखि मधुमेह सम्मको रोगसँग लड्न मद्धत पुग्छ । चिकित्सकका अनुसार दिनहुँ प्याज खाँदा मुटुसम्बन्धी विभिन्न समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
यो पनि पढ्नुस : दुवै डोज खोप लगाएपछि मास्कबाट मुक्ति ! यस्तो छ, वैज्ञानिक कारण: कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय भनेकै नाक र मुख छोप्ने गरी मास्क लगाउनु नै हो । तर, कोरोना भाइरस विरुद्धका खोपका दुवै डोज लगाएपछि समेत मास्क हटाउन नमिल्ने भनेर विज्ञ तथा अधिकारीले यसअघि बताउँदै आएका थिए । जसले गर्दा पूरै खोप लगाएपनि मास्कबाट मुक्ति नपाइएला कि भन्ने चिन्ता थियो ।
विज्ञहरुका अनुसार अमेरिकामा हाल झण्डै ४७ प्रतिशत मानिसले कम्तिमा एक डोज खोप लगाइसकेका छन् भने ३६ प्रतिशतले दुबै डोज लगाइसकेका छन् । जोखिममा रहेका धेरै मानिसहरुले खोप लगाएको हुनाले अमेरिकामा कोभिड संक्रमणको दर निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । त्यसैले पूर्ण खोप लगाएका मानिसहरुले मास्क लगाउनु नपर्ने गरी धेरै राज्यहरुमा नियम खुकुलो बनाइँदैछ ।
Previous सर्वहारा वर्गका छोराछोरी खाडीमा श्रम गर्दै, प्रचण्डका नातिनीहरू लण्डनमा मुस्कान छर्दै-
Next समिक्षाले मुख खोलेपछि पललाई पनि मुख खोल्न कर लाग्यो, खुलाए नालीबेली !
काठमाडौँ । प्रायः मानिसहरू शरीरका ससाना समस्यालाई बेवास्ता गर्छन् । जस्तो, घरीघरी पिसाब आउनु । …